अर्थतन्त्र Archives - betanadaily.com
सुन्दरहरैचा । विगत बर्ष देखि आकर्षक रुपमा संचालनमा आएको तिलहरी होमप्लास डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा सिर्जना क्याफे अहिले ग्राहकहरुको पहिलो रोजाइ बन्न सफल भएको छ । एकै भवनमा क्याफे सँगै डिपार्टमेन्ट स्टोर समेत सञ्चालन गरेर सेवा सुविधा थप गरिएको छ । स्थानीय ठाउँको विकासका साथै स्वदेशमै आत्मा निर्भर बनेर रोजगारी सिर्जना गर्न समेत तिलहरी होमप्लास डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा सिर्जना क्याफे सञ्चालनमा ल्याएको सञ्...
सुन्दरहरैंचा । मोरङको सुन्दरहरैंचा ९ स्थित विराटचोकमा बिहीबार देखि सेमिओटिक ट्रेडर्सको विधिवत् रुपमा उद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको छ । ट्रेडर्सको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवप्रसाद ढकाल , उद्योगपति भोलेश्वर दुलाल रमेश खड्का लगायतले विधिवत रुपमा रिवन काटेर उद्घाटन गरेका थिए । करिव २ करोडको लगानीमा सञ्चालनमा आएको टेड्र्समा एसि , विभिन्न कम्पनीका मोबाएल , क्यामरा, विभिन्न ब्राण्डका घडी, साउण्...
बेलबारी । बेलबारी नगरपालिकाले किसानहरुलाई बोयर जातको भन्दै बितरण गरेको बाख्राहरु धमाधम मर्न थालेका छन । बेलबारी वडा नम्बर ८ मा एक किसानलाई उपलब्ध गारएको बाख्रा मरेको केही समयपछि बेलबारी ३ को आचार्य फर्ममा उपलब्ध गराएको बाख्रा समेत मरेको थियो । नगरपालिकाले समुत्थान कृषि सहकारी संस्थालाइ उपलब्ध गराएको बाख्रा मध्ये कृषक लेखनाथ ढकाल लाइए उपलब्ध गारएको बाख्रा समेत मरेको छ । यो सँगै नगरपालिकाले उपलब्ध ग...
ईटहरी । सुनसरीको ईटहरीमा नेपालकै सबैभन्दा ठुलो भाटभटेनी सुपरमार्केट तयार भएको छ । ईटहरी चौकभन्दा ४ किलोमिटर पश्चिम लविपुरमा यहि भदौ १९ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने सुपरमार्केट २ अर्बको लगानीमा तयार भएको सञ्चालक मिनबहादुर गुरुंगले जानकारी दिए । ३५ कठठा जमिनमा ६ महिना अघिदेखि सुपरमार्केटको काम थालिएको थियो । सुपरमार्केटमा ए,बी र सी गरी ३ वटा ब्लकहरु रहेका छन । ३ वटै ब्लकको क्षेत्रफल ३ लाख बर्गफिट रहेको...
बेलबारी । जङ्गलमा उम्रिने निगुरो मोरङको उत्तरी ग्रामीण क्षेत्रका निम्न वर्गका वासिन्दाका लागि आयआर्जनको माध्यम बन्ने गरेको छ । मोरङको उत्तरी ग्रामीण क्षेत्रका निम्न वर्गका वासिन्दाले सागको रुपमा भान्सामा प्रयोग हुने निगुरो टिपेरै नुनभुटुनको जोहो गर्दै आएका छन् । उर्लाबारी नगरपालिका र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने डुम्रेको जङ्गलमा दिनहुँ निगुरोको साग टिप्ने गरिन्छ । मोरङको उत्तरीक्षेत्रमा अव...
बेलबारी । मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि १ अर्ब ३५ करोड ७० लाख ४६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्बजनिक गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न आठौं नगरसभामा उपमेयर ढाका कुमारी पराजुलीले सो बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । प्रस्तुत बजेट चालु आ.व. को संशोधित बजेटको तुलनामा आगामी आ.व. को लागि २१ करोड ५८ लाख ५७ हजार ४ सय ९३ अर्थात १८ दशमलव ९९ प्रतिशतले बढि हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि प्...
बिराटचौक । मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ का २ अर्ब १५ करोड १२ लाख ७ हजार १ सयको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बिराटचौकमा अवस्थित जेसिज भवनमा आयोजित नगरसभामा उपमेयर धनमाया तामाङले बुधबार आगामी आ.ब.को लागि सो बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन । नगरसभामा प्रस्तुत मुख्य योजना तथा कार्यक्रमहरुमा नगरका सबै वडामा सडक बत्ति जडान गर्ने, चार वटा सुबिधा सम्पन्न सबदाह स्थल निर्माण गर्ने, कोल्ड स्...
बेलबारी बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाको भवन उदघाटन,सदस्यलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा ( तस्विर र भिडियो सहित)
बेलबारी । बेलबारी १ मा रहेको बेलबारी बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाले शुक्रबार बिहान देखि आफनै कार्यलय भवनबाट सेवा शुरु गरेको छ । बेलबारी ३ स्थित नापी शाखा कार्यलय छेवैमा रहेको आफनै जग्गामा करिब २० लाख रुपैयामा निर्माण भएको भवनको शुक्रबार बिहान संस्थाका अध्यक्ष प्रताप थापा,उपाध्यक्ष बिद्यालक्ष्मी न्यौपान,सचिव दुर्गा सुवेदी लगायत संस्थाका कर्मचारीको उपस्थितिमा रिबन काटेर उदघाटन गरिएको हो । बि.स २०५८...
सीपलाई जीवन रुपान्तरणको माध्यम बनाउन आग्रह
बेलबारी । बेलबारीमा धिमाल जातीय विकास केन्द्र बेलबारी नगर समितिको आयोजनामा ऐतिहासिक धिमाल जातिको परम्परागत भेषभुषा अर्थात पोशाक उत्पादन तालिम सम्पन्न भएको छ । गत वैशाख ५ गते उद्घाटन भएको उक्त तालिम २० दिनसम्म चलेको र कोरोना महामारी र सरकारद्धारा जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण समापन कार्यक्रमलाई सिमित व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा सामाजिक दुरी कायम गरी साधारण रूपमा कार्यक्रम समापन गरिएको संस्थाका अध्यक्ष...
बेलबारी । बेलबारी नगरपालिकाले (हेलो उपमेयर क्विक रेस्पोन्स) अभियान संचालन गर्ने भएको छ। बिहीवार बसेको नगरस्तरीय उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकले बजारलाई संकटको समयमा समेत उपभोक्ता मैत्री बनाउँन बजार अनुगमनलाई निरंतरता दिइने,कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई कार्वाही गरिने,तत्काल उपभोक्ताहरुको गुनासो सुनुवाई र द्रुत समाधानका लागि (हेलो उपमेयर क्विक रेस्पोन्स)अभियान संचालन गरिने साथै दैनिक उपभोग्य सामग...